Casharka 62aad ee Kitaabka Siirada Nebiga Muhammed SCW
1. Wuxuu Rasuulku SCW direy bishii Shacbaan, sannadkii 6aad ee hijriga ciidan uu hoggaaminayey Cabdiraxman binu Cawf, wuxuuna u direy qabiilka la yiraahdo banii Kilaab, wuxuu Rasuulku SCW u dardaarmay Cabdiraxman arrimo ku saabsan dagaalka, wuxuuna ku yiri "haddii ay ku adeecaan (islaamaan) guurso gabadha uu dhalay ninkooda madaxda ah". Cabdiraxman iyo ciidankiisii waxay ka ambabaxeen Madiina, markii ay gaareen meeshiii ay qabiilkaasi degganaayeen way degeen, waxayna islaamka ugu yeerayeen saddex maalmood, markaas ayey islaameen. Ka dib Cabdiraxman wuxuu guursaday gabadh uu dhalay ninkii odeyga u ahaa oo la oran jirey Tamaadar bintu Asfaq.
2. Sidoo kale wuxuu Rasuulku SCW direy isla bishii Shacbaan ee sannadkii 6aad ee hijriga ciidan uu hoggooaaminayo Cali binu Abii-dhaalib, wuxuuna u direy qabiilkii la oran jirey banii Sacad banii Bakar oo ciidammo ururinayey yahuuddii Khaybar degganayd. Wuxuuna dhammaa ciddankaas 200 oo nin, waxayna socon jireen habeenkii maalinkiina way degi jireen. Markii ay dhex marayaan ayey qabteen nin qabiilku ay Khaybar iyo yahuud u dirsadeen, markii ninkii la wareystayna wuxuu u sheegay in Khaybar loo diray si uu yahuudda Khaybar ugu bandhigo in ciidan loo soo diro iyaguna ay timirta Khaybar wax ka bixiyaan. Ninkii ayey markaas kaxeysteen si uu u tusiyo meesha ay cadowgu ku shirayeen. Qabiilkii reer banii Sacad markii ay ciidankii muslimiinta maqleen way kala yaaceen. Ciidankii muslimiintu waxa ay meeshii ka soo kaxeysteen 500 oo geel ah iyo 2,000 oo ari ah, dabadeedna waxa ay ku soo laabteen Madiina.
3. Waxaa iyana sidoo kale dhacay bishii Shawaal isla sannadkii 6aad ee hijriga in kooox rag ah oo u dhashay qabiilooyinka la kala yiraahdo Cukal iyo Cureyna ay soo islaameen oo Madiina yimaadeen. Maalmo markii ay Madiina joogeen ayey jirradeen, markaas ayuu Rusuulku SCW wuxuu u direy geel sadaqo ahaa oo magaalada duleedkeeda loogu hayey, wuxuuna amray in ay isku darsadaan caanaha iyo kaadida geela oo ay cabbaan. Markii ay sidii yeeleen oo caafimaadeen ayey ninkii geela ilaalinayey dileen, geeliina dheceen. Warkii ayaa Rasuulka SCW soo gaaray, markaas ayaa Rasuulku SCW ka daba direy ciidan ka kooban 20 nin oo uu madax u ahaa Kuras binu Jaabir. Kuras iyo ciidankiisii way ka daba tageen, muddo dabadeedna iyaga oo wada ayey keenee. Wuxuu markaa Rasuulku SCW amray in nimankaas lugaha iyo gacmaha la jaro, indhahana maddane dabeysan looga soo saaro. Dabadeedna waxaa lagu tuuray kulaaleyda Madiina iyaga oo ku dhawaaqaya "biyo" ilaa ay ka naf baxeen, taas oo ahayd abaal marintoodii maxaa yeelay way riddoobeen, ninkii muslimka ahaa ee Rasuulka SCW geela u hayeyna way dileen, geeliina way dheceen. Waxay isku darsadeen gaalnimo, dil iyo tuuganimo. Allaahna waxa uu qur'aankiisa ku yiri isaga oo tilmaamaya arrinkooda iyo kuwa la midka ah sida qaadhicu dariiqiinta wadada istaaga oo dadka dila xoolahana dhaca sidan:
((ABAAL MARINTA KUWA LA DAGAALAMA ALLE IYO RASUULKIISA OO DHULKA FASAAD KULA SOCDA WAA IN LA DILO AMA LA SALBIYO AMA GACMAHA IYO LUGAHA IS DHAAF LOO GOOYO AMA DHULKA LAGA MUSAAFIRIYO, TAASINA WAXAA WEEYE IN AY LEEYIHIIN ADDUUNKA DULLE, AAKHIRANA CADAAB WAYN)), (Suuurtul-Maa'ida 33).